Ny maha-zava-dehibe ny marika amin'ny tetikasa sary | Famoronana an-tserasera
Ny maha-zava-dehibe ny marika amin'ny tetikasa sary Izy io dia singa fototra amin'ny famolavolana. Ny sarin'orinasa dia tsy maintsy maneho tsara andiana idealy sy toha-marika iray, ity fisolo tena ity dia tsy maintsy hita amin'ny lafiny rehetra mifandraika amin'ny marika. Ny marika dia orinasa velona de mitombo, miova ary manana ny maha izy azy, noho izany antony izany dia tsy maintsy farito tsara ny toetran'ny marika sy ny zavatra ataony.
Like misy olona manana ny maha izy azy ary ny zavatra nataony no nahatonga azy ho tena izy, toy izany koa no miseho amin'ny marika na vokatra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hahita ohatra iray isika marika, ohatra iray izay hijerentsika ny firaisana eo amin'ny famolavolana sy ny filozofia ary ny votoatin'ny marika izay soloina solontena.
Ny marika tsara dia mifamatotra amin'ny toetra iray foana mamaritra ny fomba fiasan'izy ireo alohan'ny tontolo ivelany. From filozofia anao manokana dokam-barotra tokony nifantoka tamin'io tanjona io hanehoana ny tena maha-izy azy sy izay tadiaviny hahatongavana. Hijery ohatra avy amin'ny marika tsara sasany izahay ary hiresaka momba ny hevi-dehibe sasany.
1 Ny votoatin'ny marika
2 Manomeza sary ny votoatin'ny marika
Ny votoatin'ny marika
Ny marika rehetra dia samy manana ny fotony, fomba fiasa izay mahavita maneho ny maha izy azy. Farito ny sanda marika Azo antoka fa izany no dingana voalohany. Ny marika coca Cola Tsy marika tsiranoka zava-pisotro mamy mamy fa marika maneho fianakaviana sy fahasambarana. Coca-Cola dia tsy mampiasa loko mena satria tsara tarehy ny feony fa noho ny psikolojia loko izany dia maneho, izany no antony marika dia tsy maintsy mifototra amin'ny zavatra tena izy, Tsy midika izany hoe tokony apetrakao amin'ny lafiny hafa ny famoronana fa kosa tokony hampifantohantsika amin'ny lalana manokana.
Raha mijery akaiky ny doka ianao coca Cola ho hitantsika foana io lamina io:
Marika hafa toa Nike mampiasa hevitra toa azy ireo izy ireo angovo, tanjaka, hery, fandresena rehefa miresaka amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Marika natao ho an'ny atleta izy io ary ity Azontsika jerena amin'ny sariny orinasa sy amin'ny dokam-barotra rehetra izany. From anarana manondro Victoria, ny sariny dia nisolo tena ny hafainganam-pandeha, ary ny dokam-barotra mampiseho ny herin'olombelona sy angovo, Nike dia nahavita namaritra tsara ny soatoaviny.
Marika hafa toa Starbucks mifantoka amin'ny fampisehoana toetra iraisan'ny besinimaro kokoa te-hahatratra ny fampiasana ny traikefa mpampiasa ho heriny lehibe. izy ireo Tsy mivarotra kafe izy ireo fa mivarotra traikefa, fampiononana ary moderina, bubble izay ahafahanao ho tonga amin'ny tontolo mahafinaritra sy manintona.
Manomeza sary ny votoatin'ny marika
Ny fanaovana ny mason'ny marika ho hita maso no lakileny hahatratra marika tsara. Misaotra ny fampiasana ny fiteny sary ny marika dia mahavita manala ny fotokevitrao rehetra amin'ny fiteny sary. Na tsara amin'ny fampiasana ny marina sary vondrona na miaraka dokam-barotra mifototra amin'ny fomban'ny marika, ny tanjona dia ny handika ny soatoavina rehetra amin'ny sary.
Coca Cola maneho ny azy ireo soatoavina sy zava-dehibe eo amin'ny fianakaviana amin'ny alàlan'ny fampiasana sary doka sy toerana izay anehoan'izy ireo ireo hevitra ireo.
Adik'izy ireo ho amin'ny toerana feno fihetsem-po izay ny olona no tena singa. Fiaramanidina fotoana mahafaly, fitiavana, firaisan-tsaina ary rivo-piainana tena miabo. Mahaliana ny mahita ny fomba tena mampiavaka ny marikao, ny zava-pisotro malefaka mandeha any aoriana. Tsy ny fivarotana zavatra intsony fa ny mivarotra fahatsapana.
Nike mampiasa ny herin'ny sarin'ireo atleta sangany, tantara momba ny fanatsarana manokana izay na iza na iza dia afaka miavaka sy ho tsara kokoa.
Seho sary amin'ny dokambarotra Nike hafatra fanatsarana ny tena izay ahafahan'ny tsirairay manao samirery ny tenany dia iray amin'ireo andrin'ny marika ity sporty.
Mampiasà olona manana vatana fanatanjahan-tena manao fanatanjahantena, mampiseho fahaiza-manao amin'ny fanatsarana sy fitarihana. Raha mijery ny dokam-barotra Nike rehetra isika dia hahita an'io fomba io foana.
"Ny vera vita sonia tsotra dia tsy vera vita sonia tsotra" Ny vera vita sonia dia manome ny maha-izy azy, an'ny vera dia an'ny mpampiasa mitondra ny anarany. Mahavita izany ampifandraiso amin'ny marika ilay mpampiasa, Tsy kafe intsony io fa ny kafe an'ny olona toy izany izay nalaina tamina toerana niantsoan'izy ireo ny anarany.
Araka ny hitantsika ny marika dia manana zavatra ao aoriana foana izay mahatonga azy ireo ho marika matanjaka sy mafy orina. Raha te-hiasa marika dia tsy mila multinational dolara an-tapitrisany dolara ianao, ny hany ilainao dia ahamarano ny marika ary asehoy ny sary Miaraka amin'ny fanampian'ny matihanina manam-pahaizana manokana, eo no manomboka ny sarin'ny mpamorona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Ny maha-zava-dehibe ny marika amin'ny tetikasa sary
Ny maha-zava-dehibe ny famolavolana newsletter